Sahwira sahwira Pro Yemahara kune Yakatemwa Nguva | IPhone nhau
Sahwira sahwira Pro akasununguka kwenguva shoma
Muchinyorwa chakapfuura takataura nezvemutambo, Dino Rush, iyo inowanikwa kurodha mahara. Iye zvino yave nguva yekushandisa, chaizvo rekodhi inotibvumidza kunyora zvinyorwa zvedu. Tiri kutaura nezve Recorder Recoder Pro application, chishandiso chine mutengo wenguva dzose muApp Store ye4,99 euros, asi kwenguva pfupi tinogona kuiwana mahara.
Izwi reNzwi manyorerwo ayo iOS anotipa isu natively, haitibvumidze kuwedzera zvinyorwa, kana zvinyorwa, kana kuwedzera mamaki…. Izvo zvinongotibvumidza isu kuwedzera zita kune zvakarekodha kuti tiwane zviri nyore. Recorder Recorder Pro yakanaka kune vatapi venhau uye kune avo vashandisi vanopinda misangano uye vanoda kuve nezvose zvakarekodhwa zvatinoita zvakarongeka uye zvakanyorwa.
1 Zvinoumba sahwira sahwira Pro
2 Details of sahwira sahwira Pro
Zvinoumba sahwira sahwira Pro
Mikana yekudzivirira zvakarekodhwa ne password.
Wedzera ma tag kune zvinyorwa kuti uwane nyore maminetsi akakosha.
Tinogona zvakare kuwedzera zvinyorwa uye mifananidzo kune zvakarekodhwa.
Iyo ine chikamu chevanoda kuponesa akakoshesa marekodhi atinoita.
Kubvumirana mumakore kuburikidza neICloud, kukwanisa kuwana kubva kune mamwe madivayiri.
Uye zvakare isu tinokwanisa zvakare kutumira kurekodha kune mamwe mafomati kuti tigovane nemamwe mafomu.
Isu tinogona zvakare kugovana zvirevo zvese zvatinoita mukurekodha kune faira rePDF uye tigozvigovana kuburikidza nemaapplication akasiyana atakaisa pamwe chete nezvakanyorwa.
Details of sahwira sahwira Pro
Kugadziriswa kwekupedzisira: 20-04-2016.
Mitauro: Spanish, German, Simplified Chinese, Chinese Chinese, Korean, French, English, Italian, Japanese, Portuguese, and Russian.
Compatibility: Inoda iOS 8.0 kana gare gare. Izvo zvinoenderana neiyo iPhone, iPad uye iPod Kubata.
Rangarira kuti isu hatizive kusvikira riini richawanikwa kurodha mahara, saka usatora nguva kuti uzvirwire pamberi pekusimudzira chisati chapfuura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Sahwira sahwira Pro akasununguka kwenguva shoma
Ndatenda neruzivo. Iwe unogona here kusanganisira iyo yakananga kubatana? Saka kana mumwe munhu achifarirawo zvinogona kukurumidza. Shuwiro yakanakisa!!
Pindura kuna delbuenri
Ndakachiisa, handinzwisise kuti nei yakabviswa. Ini ndakagadziridza uye chinongedzo chinoonekwa nemazvo.
Ini ndinoda mamwe maapplication kuti anyore chokwadi.
Apple TV inowana nzvimbo muUnited States
Dino Rush inowanikwa kurodha mahara